बस दुर्घटना हुनुअघि ड्राइभरले भनेका थिए– झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् ! - Tufan Media News
२५ आश्विन २०७६, शनिबार ०८:१३
बसका सहचालक रोकिएको बसमा ओट (अड्याउनका लागि ढुङ्गा) राख्न बस बाहिर निस्किएका थिए । चालक महाजुले बस स्टार्ट भएको बताए । बस चालकको पछाडी रहेकी श्रेष्ठले बस स्टार्ट भएको आवज पनि सुनिन् । बस ओरालोमा थियो । बसचालक बहाजुले स्टेरिङ चलाउन नपाउँदै बस आफैं ओरालो लाग्यो ।‘ब्रेक लागेन, ब्रेक फेल भयो ! तपाईहरु हाम्फाल्नुस् ! झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् ! ’
गिनिज बुक अफ वर्ल्ड
प्रहरीसंग विवाद गर्ने आस्था
शालिकराम आ*त्मह*त्या प्रक*रणमा रबि
पोखरा लक्ष्मी का*ण्ड: सासु
चामल बोकेर पुण्य र
गायिका राउतलाई आज झिकाएर